China kuIraq-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Mutsetse Webasa>Middle East Mutsara>China kuIraq
Kutumira kubva kuChina kuenda kuIraq
Vazhinji vevatengi vedu vakavakirwa muIraq, saka rave musika wakakosha kwazvo kwatiri. Takasaina kontrakiti mitengo nevatakuri vakaita seCOSCO, OOCL, APL, EMC, MSK, uye HMM. Hukama uhwu ngatipei iwe yakanaka kwazvo mitero yekutakura kana uchitakura kubva kuChina kuenda kune chero chiteshi muIraq.
Iine SHL sevadyidzani, kutumira zvinhu kubva kuChina kuenda kuIraq zvichave nyore, iwe unongoda kusiya zvinhu zvako nesu, uye isu tichaita zvimwe zvese. SHL inovavarira kuve yako yakanakisa yekutakura zvinhu kubva kuChina kuenda kuIraq. Kumbira mutengo uri nani izvozvi.
Ro-Ro / Break Bulk Kutakura kubva kuChina kuenda kuIraq
SHL inogona kupa RORO ROROMAFI BREAKBULK yezvakanaka michina, mota nemidziyo inorema kubva kuChina kuenda kuIraq Tinogona kupa imwechete yekumira uye yakagadzirirwa mhinduro
Kutakura Kwegungwa Kutakura kubva kuChina kuenda kuIraq
Tinogona kupa anokwikwidza egungwa mitero yemitero, uye akanakisa ekutumira mhinduro, zvichibva pane yako inodiwa nguva yekufambisa kana kutumira kubva kuChina kuenda kuchiteshi muIraq (kunyanya kune inland ports).
Kutakura Ndege Kubva kuChina kuenda kuIraq
Isu tichasarudza inonzwisisika ndege yendege yako yekutumira zvinoenderana nenguva yako zvaunoda. SHL ndiyo yako yakanakisa yekutumira mhinduro mhinduro yekutakura nendege kubva kuChina kuenda kuIraq.
Kutakurirwa zvakachipa kubva kuChina kuenda kuIraq
Izvi zvinoenderana nekuti zvinhu zvingani zvaunotumira kubva kuChina kuenda kuIraq, kana ukasamhanyisa nesampuro diki kwazvo, unogona kushandisa China Post kana kutaura seDHL, kana uine zvinhu zvakawanda, ipapo bata SHL, iwe unowana kwedu kwakanyanya kutumira chiyero kubva kuChina kusvika kuIraq.
Yakareba Sei / Yakawanda Sei Kutumira kubva kuChina kuenda kuIraq
Door to Door Kutumira kubva kuChina kuenda kuIraq
Kunyangwe nezvezvido zvemunhu kana zvebhizinesi, isu tinogona kukupa musuwo kutakura sevhisi sevhisi yako, iyo inosanganisira kubvumidzwa kwetsika muIraq.
Yako Yakanakisa Yekutakura Yekutakura Kubva kuChina kuenda kuIraq
Ipa anokwikwidza egungwa uye nendege mitero kubva kuChina kuenda kuIraq
Main Ndege muIraq
Maitiro Ekutumira kubva kuChina kuenda kuIraq
Pese paunenge uchiunza kubva kuChina kuenda kuIraq, unogona kusarudza nzira zhinji dzekutakura.
Ndeipi chiteshi chandinofanira kushandisa kutumira kubva kuChina kuenda kuIraq?
Nekuti iwe unoda doko rinogona kukusanganisa iwe zvakananga kuIraq
Ndeipi yakazara nguva inotorwa kutumira kubva kuChina kuenda kuIraq?
Muchidimbu, iwe unogona kukoshesa mune zvese izvi kuti uwane nguva yese yekutora ichatora kubva kuChina kuenda kuIraq
Vafambisi vekutakura zvinhu vakadaro vanoziva mitemo nemirau inotonga kuunza kubva kuChina kupinda muIraq